२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०२:२०:००
Read Time : > 14 मिनेट
नैतिक, राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेपछि प्रमुख राजनीतिक दलले सांसदको दसैँ भत्ता कोरोना कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेतृत्वबाट निर्णय गरेपछि मात्र धन्यवाद दिन सभामुख अघि सरेका छन् ।
संसद् भनेको आफैँमा सार्वभौम निकाय हो, जसले आफ्नो सेवा र सुविधाका सर्त आफैँ निर्धारण गर्छ । कानुन बनाउने विषयमा आफैँमा सार्वभौम संसद्ले भत्ता लिने विषयमा सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था किन स्वीकार गर्‍यो ? संसद्को गरिमा जोगाउने प्रमुख जिम्मेवार सभामुख अग्नि सापकोटा नै अलमलमा छन् ।
यो विषयमा नयाँ पत्रिकाले सभामुखसँग प्रश्न राखेको थियो । ‘दसैँमा भत्ता दिने भनेर अहिले भएका निर्णय होइन, यो मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको विषय थिएन, त्यसैले दसैँ भत्ता आउनुअघि यस विषयमा ध्यान पुगेन । तर, जब नयाँ पत्रिकामा प्रमुखताका साथ समाचार आयो, यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन पहल सुरु गरेँ,’ उनले भने, ‘मंगलबार सकेसम्म भौतिक रूपमा र सम्भव नभए भर्चुअल बैठक बसेर यसबारे सामूहिक निर्णयको तयारी गरेको थिएँ । तर, सोमबार दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलका तर्फबाट निर्णय लिएकाले यसबारे थप केही गर्ने अवस्था रहेन ।’
विगतमा पनि संसद्मा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिने, सांसदलाई आजीवन पेन्सनको प्रबन्ध गर्नेजस्ता विवादास्पद कदम उठाइएका थिए । जसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको थियो । दसैँ भत्ता पनि अर्को त्यस्तै दाग साबित भएको छ । यो रकम वितरण भएर विवाद सिर्जना भएपछि मात्र सभामुखका आँखा किन खुले ? यस्तो रकम वितरण हुनबाटै उनले रोक्न किन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । ‘यसपालि विशेष परिस्थितिमा दसैँ भत्ता आउने–नआउने विषयमा म आफैँलाई सचिवालयबाट पूर्वसूचना पनि भएन । मैले पनि सोधिनँ । मेरो बुझाइमा आउँदैन जस्तो लागेको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विशेष परिस्थितिबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन । भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरो लागि एउटा शिक्षा नै भयो,’ उनले भने ।
दसैँ भत्ता नैतिक मात्र होइन, यो मुद्दा कानुनी रूपमा आपत्तिजनक भएको भनेर स्थापित भएपछि राजनीतिक दल र सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, यो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा सदनको प्रमुखका रूपमा सभामुखको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएन । बरु, सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र दलले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेपछि सभामुखले यो निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण भनेका छन् । सभामुख सापकोटाले समयमा सुझबुझ देखाएको भए संसद्को गरिमामा यो दाग लाग्ने थिएन ।
सभामुखभन्दा अघि नै प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्ष नेकपाले गल्ती सुधार गरिसकेका थिए । नेकपाले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको रकम दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको सबै रकम दाखिला गर्ने निर्णय भएको छ ।’ नेकपा सांसदले दसैँ भत्तास्वरूप कुल एक करोड २६ लाख ७६ हजार पाँच सय ५० पाएको संसद् सचिवालय बताउँछ ।
त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई पत्र नै पठाएर रकम फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेसले संसद्मार्फत ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा रकम जम्मा गर्ने भनेको छ । अब कांग्रेसका सांसदहरूले पाएको एक महिना पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता उनीहरूको आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट काटिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसदले जम्मा ४३ लाख २८ हजार दुई सय १० रुपैयाँ भत्ता बुझेको सचिवालय बताउँछ । र, यो सबै रकम कांग्रेसले संसद्मार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने गरी संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
‘कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकाले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको दसैँ भत्ताबापतको रकम नेपाली कांग्रेसले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणको विज्ञप्तिमा छ, ‘उक्त रकम जनताको उपचारका लागि संघीय संसद् सचिवालयमार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्दछ ।’
तेस्रो ठूलो दल जसपाको सोमबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि आफ्ना सांसदहरूले पाएको दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘यो व्यवस्था सधैँका लागि खारेज हुनुपर्छ । हामीले संसद्मार्फत फिर्ता गर्ने भनेका छौँ । यो सिस्टम नै बदल्ने कुरा हो । व्यक्ति–व्यक्तिले फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा होइन । सधैँका लागि दसैँ भत्ता नै खारेज गर भन्यौँ हामीले । अब दलको बैठक बसेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँछौँ । अर्काे महिनाको तलब काटिन्छ ।’ जसपा सांसदहरूले पाएको दसैँ भत्ताबापत पाएको २३ लाख १५ हजार चार सय ३० रुपैयाँ पनि फिर्ता हुने निर्णय भयो ।
त्यस्तै, सभामुख सापकोटाले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले आइतबार नै संसद् सचिवालयलाई नगदै फिर्ता गरेका थिए । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब ०७३ सालको संघीय संसद् पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन’अनुसार ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले ०७६ भदौमा सरकारले बढाएको तलबअनुसार ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म एक करोड ९३ लाख २० हजार एक सय ६० रुपैयाँ विभिन्न स्वरूपमा फिर्ता हुने पक्का भएको छ । तर, पाँचजना सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा भत्ता गइरहेको सचिवालयको भनाइ छ । स्वतन्त्र रूपमा विमला राई पौड्याल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, छक्कबहादुर लामा, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले कुल तीन लाख २० हजार तीन सय ५० रुपैयाँ लिएको सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूले रकम फिर्ताबारे निर्णय लिएका छैनन् ।
हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो एक महिना पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता पाएका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक ६४ हजार ७० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दलको नेताले ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।
मुख्य सचेतकको पारिश्रमिक अहिले ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ रहेको छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सत्तापक्षीय सचेतकको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । विपक्षी दलका सचेतकको पारिश्रमिक ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, १६ वटा संसदीय समिति सभापतिको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रहेको छ ।
देश कोभिड संकटमा भएको वेला सांसदहरूलाई दसैँ पेस्की वितरण भयो, कानुनमा सांसदलाई दसैँ भत्ताको प्रबन्ध नै छैन । नैतिक मात्र होइन, यो मुद्दा कानुनी रूपमा आपत्तिजनक भएको भनेर स्थापित भएपछि राजनीतिक दल र सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । तर, यो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा सदनको प्रमुख तपाईं कतै भूमिकामा देखिनुभएन, किन ?
दसंैँमा भत्ता दिने भनेर अहिले भएको निर्णय होइन, यो मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको विषय थिएन, त्यसैले दसैँ भत्ता आउनुअघि यस विषयमा ध्यान पुगेन । तर, जब नयाँ पत्रिकामा प्रमुखकताका साथ समाचार आयो, यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन पहल सुरु गरेँ । मैले प्रमुख सचेतकहरूसँग संवाद थालँे । तर, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरी दुवैजना बिरामी भएकाले उहाँहरूसँग परामर्श हुन पाएन । विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग छलफल गर्दै थिएँ । जो जहाँ भए पनि मंगलबार सकेसम्म भौतिक रूपमा र सम्भव नभए भर्चुअल बैठक बसेर यसबारे सामूहिक निर्णयको तयारी गरेको थिएँ । तर, सोमबार दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलको तर्फबाट निर्णय लिएकाले यसबारे थप केही गर्ने अवस्था रहेन । नेपाल सरकारको गत वर्षको निर्णयअनुसार उपलब्ध गराइएको सुविधाका सन्दर्भमा हालको संकटपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णयलाई मैले स्वागत गरेको छु ।
तर, मुख्य विषय के भने, संसद् भनेको आफैँमा सार्वभौम निकाय हो जसले आफ्नो सेवा र सुविधाका सर्त आफैँ निर्धारण गर्छ । तर, संसद्को कानुनमा हँुदै नभएको दसैँ भत्ता लिन सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था संसद्ले किन स्वीकार ग¥यो ? संसद्को गरिमा जोगाउने प्रमुख जिम्मेवारी तपाईंको हो, तपाईं चुक्नुभएको होइन ?
सरकारले कुनै कानुनी अनुच्छेद उल्लेख गरेको भए स्पष्ट हुन्थ्यो । ऐनमा नभएकाले प्रश्न त उठिहाल्यो । तर, यो निर्णय अहिले भएको होइन, गत वर्षबाटै लागू भएको हो । यसपालि विशेष परिस्थितिमा दसैँ भत्ता आउने–नआउने विषयमा म आफैँलाई सचिवालयबाट पूर्वसूचना पनि भएन । मैले पनि सोधिनँ । मेरो बुझाइमा आउँदैन जस्तो लागेको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विशेष परिस्थितिबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन । भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि एउटा शिक्षा नै भयो ।
हो, देश अहिले कोभिड संकटमा छ । तर, अवस्था सामान्य भएको भए पनि सांसदले दसैँ भत्ता पाउने त कानुनी रूपमा व्यवस्था नै छैन । संघीय संसद् पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले त्यस्तो भत्ताको परिकल्पना गरेकै छैन, यो त कानुनी रूपमा पनि प्रश्न भयो नि ।
अवश्य पनि यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, बहस भएको छ । ऐन–कानुन बनाउने र सदनको गरिमा उच्च बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइन्छ । संसद्को नेतृत्वकर्ताको नाताले मलाई यो घटनाले अब सांसदको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी निर्णय र कानुन बनाउन नयाँ सोच विकसित गराएको छ । अब सेवा–सुविधाबारे हुने नीतिगत निर्णयमा आवश्यक छलफल गरी उचित प्रबन्ध गर्नेछौँ । संसद्को गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरूसँगको सल्लाहमा संसद्ले सही निर्णय लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
विगतमा पनि संसद्मा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिने, सांसदलाई आजीवन पेन्सनको प्रबन्ध गर्नेजस्ता विवादास्पद कदम उठाइएका थिए । जसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको थियो । दसैँ भत्ता पनि अर्को त्यस्तै दाग साबित भयो, तपाईंको पाला यस्तो परिवेश बन्यो नि ?
संघीय संसद् जनताका प्रतिनिधिको थलो हो । कानुन बनाउन यो सार्वभौम छ । त्यसैले संसद्ले आफ्ना निर्णय र कदमद्वारा जनतामा विश्वास जगाउँछ भन्नेमा मेरो अटुट विश्वास छ ।
संसद्को अगुवा तपाईं हो, तर नैतिक प्रश्न पनि हो भन्दै सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा रकम फिर्ता गरे । नेतृत्वकर्ताको रूपमा तपाईं अगाडि आउनुपर्ने थियो नि ?
मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्न सक्थेँ । त्यतिले मात्रै मेरो दायित्व पूरा हुने थिएन । मैले अघि पनि भनेँ– कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मंगलबार बोलाउने तयारी गर्दै थिएँ । त्यहाँबाट एउटा सामूहिक रूपमा सकारात्मक निर्णय आउँथ्यो । त्यसअगाडि केही माननीयले र पछि दलहरूले आफैँ निर्णय लिए । सकारात्मक पहल जहाँबाट भए पनि राम्रो नै भयो ।
सांसद र राजनीतिक दलले दसैँ भत्ताबापतको रकम विभिन्न कोषमा पठाउने भनेका छन् । सांसदले नियमसंगत पाउने तलब भएको भए उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मन लागेको ठाउँमा पैसा पठाउन सक्थे होला । तर, दसैँ भत्ताका रूपमा पाएको रकम त उनीहरूको होइन । यहाँ पठाउने, त्यहाँ पठाउने भनेर आफैँ निर्णय गर्न सक्छन् ?
सरकारले निर्णय गरेर दिएको सुविधा भयो । विवादमा आएपछि दलहरूले पहल गरे । सांसदहरूकै सहमतिमा कोभिड कोषमा पठाए । सांसदहरूकै सहमतिमा भएकाले यसलाई अन्यथा नलिने कि भन्ने मलाई लाग्छ । देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको वर्तमान अवस्थामा यस कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
जदुर÷किसान÷कर्मचारीहरूले जीवनभरि काम गर्छन्, त्यसबापत दिइन्छ । अब सांसदले चाहिँ ६ महिना, एक वर्षपछि पनि छाडिदिन सक्छ । अर्काेतिर, बीचमा संसद् विघटन पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा सरकारलाई अनावश्यक भार पनि हुन्छ । दोस्रो कुरा, एउटै सांसदको क्षेत्रमा पनि दुई–तीनजना उठिदिन सक्छन्, पालैपालो गरेर, त्यसो हुँदा सबैलाई दिनुपर्ने भयो । नयाँ विकृति आउँछ त्यो, त्यसकारण कर्मचारी र हामी फरक छौँ । त्यसकारण यो काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो । हामीले धेरै विरोध गरेका थियौँ ।’
काठमाडौं÷ सांसदहरूले दसैँ भत्ता बुझेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ‘ब्याक डेट’मा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भत्ता फिर्ताको निर्णय लिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र बनिरहेका वेला मन्त्रीले राज्यकोषबाट दसैँ भत्ता लिएका थिए । तर, चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले ‘ब्याक डेट’मा निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।
सरकार कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिएकोमा विपक्षी कांग्रेसको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकार कोभिड– १९ को परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
‘कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि कुरा नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’
कांग्रेसले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्नचिह्न’ खडा भएको पनि बताएको छ । ‘कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्नचिह्न’ खडा गरिसकेको छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफँै उद्यत रहेको पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सांसद विकास कोष, दसैँ भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य थियो । कर्तव्य आत्मसात् गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिँदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्दछ ।’
यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलले पनि विज्ञप्ति निकालेर परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउँदै जानुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार स्वयं नागरिकले आफैँ गर्नुपर्ने तथा संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गैरजिम्मेवार र गलत निर्णय गरेको बताएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने बताएका थिए ।
कोभिड– १९ को उपचारमा सरकार कर्तव्यबाट भाग्न खोज्यो : मसाल
जनता आफैँले कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको नेकपा मसालले पनि विरोध गरेको छ । प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचारको जिम्मेवारी नलिने र बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने सरकारी घोषणाले उसको गैरजिम्मेवारिता नांगो रूपमा प्रस्तुत भएको र कर्तव्यबाट सरकार भाग्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । मसालले नेपाली जनताले मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकार, संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धीका प्रावधान, न्यायालयको आदेश आदिको संरक्षणका लागि कदम उठाउनुपूर्व नै सरकारले आफ्नो निर्णय र घोषणालाई फिर्ता लिएर कोभिड– १९ को नियन्त्रण र उपचारको सर्वसुलभ, वैज्ञानिक र समुचित व्यवस्था मिलाई जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन : २१ संगठन
यसबाहेक विभिन्न २१ संगठनले ‘अहिलेसम्म कोभिड– १९ को उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने’ सरकारको घोषणाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । २१ राजनीतिक संगठनहरूको तर्फबाट सिपी गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यदि तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड– १९ को महामारीको पनि परवाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसैसाथ जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’